Kedu ihe bụ aerothermal? | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedu ihe bụ aerothermal?
Foto - Tedesna.com
N'ime ụwa mmadụ na-arịwanye elu, ebe ọchịchọ maka ike, nri, ụlọ, wdg, na-abawanye nke ukwuu na mmetọ bụ otu n'ime nsogbu ndị anyị nwere ihu, ume ọhụrụ nwere ike ịbụ azịza anyị na-achọ.
Udi ume a di ocha ma kwanyere ugwu karia ihe eji eme mmanu. Otu n'ime ihe kachasị mma bụ aerothermal. Ka anyị hụ ihe ọ bụ na ọ bụrụ na ọ bara uru iji ya.
1 Kedu ihe bụ aerothermal?
2 Ọ na-enye anyị ohere ịchekwa ụgwọ ụgwọ ọkụ eletrik?
3 Kedu ndị bụ isi ndị na-emepụta ọkụ ọkụ ọkụ?
3.1 Kedu ka ha si arụ ọrụ?
3.2 Ọnụ igwe ikuku ikuku
4 Uru na ọghọm nke aerothermal
Foto - Canexel.es
Aerothermy bụ teknụzụ nke na-ewepụta ike site na ikuku iji ya maka ebumnuche dị iche iche, dị ka ịmepụta mmiri dị ọcha, ụlọ ndị nwere ntụ oyi ma ọ bụ oghere mechiri emechi ma ọ bụ maka kpo oku.
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu, ebe ọ bụ na anyi bi n'ikuku ma ikuku anyanwụ na-ekpo ya oku ịbanye na mbara ala, yabụ belụsọ na ihe gbanwere nke na-enweghị ike ịbụ ruo mgbe nde afọ ole na ole gafere, anyị nwere ike iji ike ha mee ihe ọ bụla.
Ọ na-enye anyị ohere ịchekwa ụgwọ ụgwọ ọkụ eletrik?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ikpo oku n'ụlọ gị ma ọ bụ ebe ọrụ, mana ị chọghị ịkwụ ụgwọ karịa ụgwọ ahụ, I kwesịrị ịma na iwepụta ume site na ikuku (ruo 70%) enweghị ọnụ, ọ bụ n'efu; nke fọdụrụ 30% bụ ihe ị na-eri. Dika mmefu ike ya pere ezigbo mpe ma oburu na anyi tunyere ya na mmanu ndi ozo nke gas, Ọ bụ azịza ga-eme ka anyị nwee ike chekwaa na akwụkwọ ọnụahịa.
Ọzọkwa, arụmọrụ ya ma ọ bụ ọnụọgụ nke arụmọrụ (COP thermal) dị elu karịa ike ndị ọzọ. Kedu ihe bụ COP? Ọ bụ ike nke ikuku ikuku na-ewe iji bufee ụfọdụ ike ọkụ, ebe ọ bụ na ịme nke a na-efunahụ akụkụ nke ume, arụmọrụ nke kpo oku kpochapụwo nke na-eji mmanụ ala erughị 100%.
Iji nye gị echiche nke arụmọrụ nke ike dị iche iche, lee anya:
Igwe mmanụ dizel: n'etiti 65 na 95%.
Igwe oku: n'etiti 85 na 95%.
Igwe mmiri na-esi mmiri ọkụ: n'etiti 80 na 95%.
Igwe radiators: n'etiti 95 na 98%.
Ike ọkụ nke anyanwụ (maka ọnọdụ okpomọkụ nke 35ºC): n'etiti 75 na 150%.
Aerothermal okpomọkụ mgbapụta (maka okpomọkụ nke 35ºC): n'etiti 250 na 350%.
Mgbapụta ọkụ na-ekpo ọkụ (maka ọnọdụ okpomọkụ nke 35ºC): n'etiti 420 na 520%.
Ya mere, ike aerothermal bụ otu n'ime ume ndị dị ugbu a nwere arụmọrụ ka elu.
Kedu ndị bụ isi ndị na-emepụta ọkụ ọkụ ọkụ?
Taa, e nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụpụta ndị na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ị ga - amata n'ihi ụdị ngwaahịa dị iche iche ha na - enye, dịka: LG Electronics, Toshiba, Daikin ma ọ bụ Bosch. Ma enwere ndị ọzọ na-azọkwa ụdị ike a, dịka Ariston, Saunier Duval, Vaillant, Hermann ma ọ bụ Viessmann.
Aerothermal okpomọkụ nfuli, ma ọ bụ n'èzí nkeji dị ka ha na-akpọ mgbe ụfọdụ, nara ike site na ikuku ma nyefee okpomọkụ na sekit. N'ime ime nke a, gas dị na friji dị na ya na-ekpochapụ, nke mere na ọkụ ahụ amịkọrọ amị na-abanye n'usoro sistemụ kpo oku n'ụlọ. Site na ime ụlọ ị nwere ike ijikwa ụdị okpomọkụ ịchọrọ ịnọ n'ime ụlọ. Ma kwa, ndị na-ekpo ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma, ebe ọ bụ na ha na-ajụ oyi n'oge ọkọchị, n'ihi ya enwere ike iji ha mee ka usoro kpo oku yana ọdọ mmiri.
Image - Energiaeficaz.es
Ikuku si n'èzí na-abanye na kọntaktị ahụ, ihe nju oyi dị n'ime ya na-ekpochapụ ka ọ na-ajụ oyi.
Igwe nju oyi ahụ na-aga compressor, ebe a na-etinye ya na ọnọdụ okpomọkụ.
Mịkọba gas na-abanye na condenser. Ka ọ na-agbadata, ọ na-ewepụta okpomọkụ nke ga-eme ka ebe obibi dị jụụ. A na-agbanwe gas na-eme ka mmiri ghọọ friji mmiri.
Mmiri mmiri na-agba ume na-agagharị na valvụ mgbasa, nke na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ ya belata ma weghachite ya na evaporator. Ma bido n’elu 🙂.
Ọnụ igwe ikuku ikuku
Nfuli okpomọkụ nke Aerothermal ha na-enwekarị ọnụ ahịa dị elu, nke dịgasị dabere na ọtụtụ ihe: akara, ike, ma ọ bụ mkpanaka ma ọ bụ na ọ bụghị, ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ jiri gas ma ọ bụ mmanụ dizel, ike kpo oku ọ nwere yana ikuku ikuku ọ nwere ike ịgbanwe na ike, ma o nwere thermostat, ma ọ bụ na ọ nweghị, ...
A mma mma okpomọkụ mgbapụta nwere ike na-eri gị ihe karịrị 1000 euro, na programmer na mgbochi legionella ọrụ gụnyere yana ibu arọ nke 55kg. Mana enwere ọtụtụ ndị dị ọnụ ala. N'ezie, na-erughị euro 150 ịnwere ike ịnweta igwe eletrik eletrik na obere mkpirisi.
Uru na ọghọm nke aerothermal
Aerothermy nwere ọtụtụ elele, mana ụfọdụ ọghọm ekwesiri ịmara.
Ọ bụ ume ọhụrụ.
Ga-adabere naanị n'otu isi iyi ike na soplaya.
Na-ebelata ikuku nke carbon dioxide (CO2).
Ọrụ dị elu karịa ike ndị ọzọ.
Ọ dị obere mara na Spain.
A ghaghị ikuku oyi na-arụ ụlọ ahụ na obere okpomọkụ.
Enwere mmetụta ọhụụ ma ọ bụrụ na arụnyere n'èzí.
Ọnụ nrụnye nke onye na-ekpo ọkụ ọkụ dị elu karịa nke a na-agbaso.
Foto - Interempresas.net
Na mkpokọta, aerothermy bụ ike nwere ike ịba ezigbo uru, ị naghị eche?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe » Kedu ihe bụ aerothermal?
2017 ga-ekpo ọkụ, mana ọ gaghị abụ ndekọ
Ndị a bụ ọdụ ụgbọ elu ikuku kacha mma inye na ekeresimesi